C/weli Gaas oo beeniyay hadal maalmihii ugu dambeeysay la isla dhexmaraayay (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/weli Gaas oo beeniyay hadal maalmihii ugu dambeeysay la isla dhexmaraayay (DHAGEYSO)
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa beeniyay warar maalmihii ugu dambeysay la isla dhexmaraayay, kaas oo ku saabsanaa in dowladda Imaaraadka Carabta ay saldhig militeri ka sameeysaneyso deegaanada Puntland.
C/weli Gaas ayaa waxbo kama jiraan ku tilmaamay wararkaasi sheegaya in dowladda Imaaraadka Carabta saldhig militeri ka furaneeyso Puntland, waxa uuna tilmaamay in xitaa aysan jirin rajo ku aadan in Imaaraadka uu xilliga mustaqbalka ah saldhig militeri ka furto Puntland.
Waxa uu C/weli Gaas sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay dhinacyo badan ka taageerto maamulkiisa, waxa uuna xusay inaysan qarsooneyn taageeradda ay ka helaan Imaaraadka, sida tababarka ay siiyaan ciidanka badda ee Puntland.
“Dowladda Imaaraadka Carabta ahi waxay naga taageertaa tababarka iyo ciidanka Badda, laakiin saldhig militeri oo uu iminka Imaaraadka leeyahay oo Puntland ka jira ama uu nagala hadlay islamarkaana aan rajeeynayno ma jiro” Sidaasi waxaa yiri madaxweyne C/weli Gaas.
Si kastaba, hadalka kasoo baxay madaxweynaha Puntland C/weli Gaas ayaa kusoo aadaya xilli maalmihii ugu dambeysay ay soo baxayeen warar ku aadan in Imaaraadka Carabta uu doonayo in saldhig labaad uu ka dhigto Puntland, waxaana horey u jiray dood ka dhalatay in garoonka diyaaradaha Berbera oo lagu wareejiyay Imaaraadka Carabta.